किन महिलाको तुलनामा कम पुरुष मास्क लगाउँछन् ? – Life Nepali
काठमाडौं। लामो बहसपछि मोनिका घर छाडेर माइती जाने निर्णयमा पुगिन्। उनका पति एडवार्डोले मास्क लगाउन निरन्तर इन्कार गरिरहे। यही कारण मोनिकाले आफ्नो सात वर्षको छोरा बोकेर माइत जाने निर्णय गरिन्। ब्राजिलको राजधानी रियो डि जेनेरियो नजिकैको एक सहर नितेराईमा मोनिका परिवारका साथ बस्छिन्। अमेरिकापछि ब्राजिल कोरोना सङ्क्रमणबाट बढी मानिसको मृ’त्यु हुने मुलुक हो।
‘‘मलाई दमको रोग भएकाले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम अधिक छ। तर मेरा पति मास्क लगाउन मान्दैनन् र मलाई बढी दिक्क लगाउँछन्,’’ मोनिका भन्छिन्, ‘‘मेरा पतिलाई लाग्छ, उनलाई मास्क लगाउन जरुरी छैन। किनकि जब उनी घरबाट बाहिर निस्कन्छन्, बन्द कोठामा बस्दैनन्। तर उनलाई म र छोराको जोखिमबारे कुनै चिन्ता छैन।’’ जोन्स हप्किन्स युनिभर्सिटीको आँकडा अनुसार जुलाई ९ सम्ममा एक करोड २० लाख मानिस कोरोना सङ्क्रमित भएका छन् ‘
(अध्ययनले देखाएको छ, सुरक्षा उपाय अवलम्बनमा महिलाभन्दा बढी पुरुष उदासीन। — कतिपय पुरुषलाई भ्रम छ महिलाको तुलनामा आफूलाई भाइरसको सङ्क्रमणको सम्भावना निकै कम छ। — २२ देशमा भाइरसबाट मृत्यु हुनेमा बढी . — मात्रामा पुरुष नै थिए, जो मास्क लगाउने सवालमा कम रुचि राख्थे। / * हात धुने सवालमा पनि पुरुष महिलाभन्दा पछि)
भने यसबाट साढे पाँच लाखको मृत्यु भइसकेको छ। र, जुन मुलुकमा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ, त्यहाँ पुरुष बढी देखिएका छन्। अध्ययनले के पनि देखाएको छ भने, सुरक्षा उपाय अवलम्बनमा महिलाभन्दा बढी पुरुष उदासीन रहेका छन्। मास्क नलगाउनेमा पनि पुरुष निकै बढी छन्। विभिन्न स्वास्थ्य सम्बद्ध संस्थाहरुले कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्ने सबैभन्दा उचित उपाय मास्क लगाउनु नै रहेको बताउँदै आएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)ले भनेको छ, ‘‘कोरोना सङ्क्रमण बढ्नबाट रोक्ने सबैभन्दा उचित उपाय भनेको मास्क लगाउनु नै हो।’’ तर डब्ल्यूएचओले कपडाको या गैर–मेडिकल मास्क लगाएर कोरोना रोकिन्छ भन्ने निश्चितता नभएको बताएको छ। सामाजिक दूरी सम्भव नहुने स्थानमा मास्क लगाउनु राम्रो हुने पनि डब्ल्यूएचओको भनाइ छ।
मास्कले सङ्क्रमणबाट जोगाउँछ भन्ने जान्दाजान्दै किन पुरुष यो प्रयोग गर्न चाहँदैनन् ? यो प्रश्नको जवाफमा मिडलसेक्स युनिभर्सिटीमा अर्थशास्त्रका सिनियर लेक्चरर भ्यालेरियो क्यापरेरो तथा बकर्लेका म्याथमेटिकल साइन्स रिसर्च इन्स्टिच्युटका क्यानेडियन गणितज्ञ हेलेनी बार्सिलोले बहुचर्चित अनुसन्धान गरेका छन्। यी दुईले अमेरिकाका अढाइ हजार मानिसमा अनुसन्धान गरेका थिए। र, उनीहरुले पत्ता लगाएका थिए।
पुरुष महिलाको तुलनामा मास्क लगाउन नमान्ने मात्र होइन, तिनलाई यो कमजोरी हो भन्ने पनि थाहा छ। पुरुषले मास्क कम लगाउने मुलुक त्यस्ता छन्, जहाँ मास्क कडाइका साथ लागु गरिएको छैन। घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने महिलाको सङ्ख्या पुरुषको तुलनामा दोब्बर रहेको पनि अनुसन्धानमा पत्ता लागेको थियो। कतिपय पुरुषलाई भ्रम छ, महिलाको तुलनामा आफूलाई भाइरसको सङ्क्रमणको सम्भावना निकै कम छ। तर यथार्थ योभन्दा फरक छ।
दुनियाँभरमा महिलामा भन्दा पुरुषमा सङ्क्रमण दर अधिक छ। अर्को एक अध्ययनले के पत्ता लगाएको छ भने, हात धुने सवालमा पनि पुरुष महिलाभन्दा पछि छन्। हालै सम्पन्न एक सर्वेक्षणले ६५ प्रतिशत महिलाले नियमित हात धुने गरेको पाइएको र ५२ प्रतिशत पुरुषले हात धुने कुरामा सकारात्मक धारणा राखेको देखाएको थियो।
क्यापेरेरो र बार्सिलोले अमेरिकामा आधारित रहेर सर्वेक्षण गरेका थिए। व्यक्तिगत सुरक्षाको सवालमा गम्भीर राजनीतिक असर समेत परेको सर्वेक्षणमा देखिएको थियो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीका समर्थकभन्दा डेमोक्रेटिक पार्टीका समर्थक बढी मात्रामा मास्क लगाउने कुरामा सकारात्मक रहेको पाइएको थियो। त्यतिमात्र होइन सामाजिक दूरी कायम राख्नेमा पनि डेमोक्रेटिक पार्टीका समर्थक नै बढी रहेको भेटिएको थियो।
राजनीति जोडिएको मामिलामा पनि पुरुषभन्दा महिला नै बढी सचेत रहेको पाइएको थियो। यतिखेर मास्कको महत्व थप बढेको छ। कोरोना भाइरस हावामा पनि हुने तथ्य पत्ता लागेपछि मास्क अब अनिवार्य वस्तु बन्न पुगेको छ। जापानी वैज्ञानिकले २२ देशमा गरेको अध्ययनले मास्क र नागरिकको मृत्युबीच गहिरो सम्बन्ध रहेको देखाएको थियो।
यी २२ देशमा भाइरसबाट मृत्यु हुनेमा बढी मात्रामा पुरुष नै थिए, जो मास्क लगाउने सवालमा कम रुचि राख्थे। युनिभर्सिटी अफ कोपनहेगनका बिहावरियल वैज्ञानिक क्रिस्टिना ग्रावर्ट मास्क लगाउने विषयमा पुरुष र महिलाबीचको फरक सोच देखेर छक्क परेकी छन्। उनले बीबीसीसँग कुरा गर्दै महिला बढी सचेत रहेको बताइन्। (बीबीसी)
Previous सु’र्तीजन्य सेवनले दाँत बि’ग्रिएको छ भने अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय, चमकदार हुनेछ दाँत !
Next १५ दिनमै मो’टोपना घटाउन के गर्ने ? यस्ता छन घरेलु उपायहरु-